INew York izoyeka ukutshala imali ezintweni ezimbiwa phansi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
INew York izoyeka ukutshala imali kwizibaseli ezimbiwa phansi
UBill de Plasio, iMeya yaseNew York.
Isithombe - REUTERS
Elinye lamadolobha amakhulu eMelika, iNew York, lizoqala ukulwa ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu. Uzokwenza kanjani? Ukuthatha izinyathelo zomthetho ngokumelene ne-ExxonMobil, iConocoPhilips, i-DRM, i-Royal Dutch Shell ne-BP, okuyizinkampani zikawoyela ezibaluleke kakhulu, hhayi eNyakatho Melika kuphela, kepha nasemhlabeni.
Lokhu kunqunywe nguBill de Blasio, imeya yeDemokhrasi yaseNew York nalokho okubonakala kungukuphikisana kukaDonald Trump, okungenani okwamanje.
UDe Plasio wayeqonde futhi ephoqa: »izinkampani ezisebenzisa uphethiloli zazazi ngomthelela wesimo sezulu futhi zadukisa umphakathi ngamabomu ukuze zivikele inzuzo yazo. Kumele bakhokhe». Inhloso icacile: ukubamba izinkampani ezinkulu zikawoyela ukuthi zibhekane nomonakalo abekade bewenza kuze kube yimanje, futhi, nokuthola isinxephezelo sezezimali sokwenza idolobha liphephe futhi limelane ngokwengeziwe namazinga olwandle neziphepho. ezishisayo '.
Ukuguquka kwesimo sezulu kungokoqobo. Ukuhlolwa kuvela cishe nsuku zonke. Amarekhodi okushisa angokomlando aphuliwe, kwakheka izenzakalo zezulu eziya ngokuya zibe yingozi. Ukubheka lokhu, kubalulekile ukutshala amandla ahlanzekile futhi avuselelekayo, uyeke ukukwenza kumandla okubasa. Kodwa-ke, futhi bekungenziwa kanjani ngenye indlela, izinkampani ezinikele ekukhipheni uwoyela zakuphika ukuthi lokhu kube nomthelela ekuguqukeni kwesimo sezulu. Ukucacisa kabanzi, i-ExxonMobil, i-DRM neRoyal Dutch Shell bathe "lolu hlobo lwamacala alunikeli kulokho."
Futhi ngiyazibuza: ingabe ngampela ukuthi uwoyela "ngephutha" ophelele olwandle izikhathi eziningi, njengoba kwenzeka eGalicia eminyakeni eyi-15 eyedlule, awuthinti imvelo? Ngabe uphethiloli noma udizili izimoto akukushintshi ukulingana kwemvelo komkhathi?
Ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokushintsha izinto eziningi. Ukuhlala phansi sikhulume ngokuhle kakhulu kithi, njengabantu, kodwa nangezinye izinhlobo zokuphila. Ngoba asisodwa kule planethi.
Ulwazi oluningi lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » INew York izoyeka ukutshala imali kwizibaseli ezimbiwa phansi
U-2018 uqala ngemvula engaphezu kwamanani ajwayelekile
Unyaka wezi-2017 ube ngomunye wemfudumalo nesomisa kunayo yonke emlandweni